Nyochaa smart ntị ọmarịcha ụkpụrụ teknụzụ, kedụ ihe ị maara
Enwere ike ịhụ teknụzụ nwere ọgụgụ isi, otu oge dị anya site na anyị, na ndị na-agbapụta akụkọ sayensị, ugbu a, anyị nwere ike ịnweta teknụzụ nwere ọgụgụ isi n'ụzọ dị nfe, dị nnọọ mkpa obere igwe ntị ntị, ị nwere ike ịghọta nrọ nke ntụ oyi na-akpaghị aka, ọkụ na-akpaghị aka, naanị dị ka ịbụ ca ...
Gịnị bụ isi uru isii nke iyi ihe ekweisi Bluetooth
1. Nzuko Inyeaka Teleconferencing bụ ihe a na-ahụkarị na ọrụ na ndụ taa. Ọ bụrụ na ijide ekwentị otu awa n’ebe dị anya, olu na ogwe aka gị ga-adị ụfụ nke ukwuu. Ekwenyere m na ụmụ akwụkwọ ndị nwere ụdị ihe mgbu na nhụjuanya a ga-achọ inweta isi Bluetooth ...
Nlekọta anya nke ntị
Ekweisi na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ndụ kwa ụbọchị, ịga ije n'okporo ámá nwere ike ịhụ ọtụtụ mmadụ na-eme njem, ga-eyiri ekweisi iji nwee ọ enjoyụ egwu. Ekwe ntị nleba anya dị ezigbo mkpa na ndekọ ọkachamara na egwuregwu n'ihi olu mmadụ pụtara ìhè. Ma ọ bụrụ na nchekwa na ojiji na-ezighi ezi ga-emebi ...
Igweisi anyị bụ ụlọ ọrụ na-ejikọ ụlọ ọrụ na azụmaahịa na ekwe ntị ekwe ntị
Ka anyi bido site na iwebata ekweisi. Igweisi anyị bụ ụlọ ọrụ na-ejikọ ụlọ ọrụ na azụmaahịa na ekwe ntị ekwe ntị. Ekwenyere m na onye ọ bụla maara na ekweisi ekweisi na ahịa na-emi esịnede tred Wired ekweisi na wireless ekweisi, ma m kwere na ị nwere ike ọ gaghị ama nke ...
Njirimara arụmọrụ nke ks-017
1. Njirimara arụmọrụ nke ks-017 Ga-akwado echiche imewe nke onwe, ịdị mfe na ejiji nke isi. Green dị ka nchedo gburugburu na nchekwa na gburugburu ebe obibi, 017 anyị na-akọwacha agwa a ...